လျှပ်စစ်ထုတ်စက်စက်ရုံ - တရုတ်လျှပ်စစ်စက်အားစက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Custom * Input Rated Power EDM Spark Erosion စက်သည် 150 * 350mm Magnet Chuck နှင့်အတူ
မော်ဒယ်: CNC1470N စားပွဲတင်ခရီးသွား - 1400 * 700 * 500mm ရေနံကွန်တိန်နာအရွယ်အစား: 2250 * 1300 * 650mm စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 1500 * 900mm မက်စ်။ အလေးချိန် ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန် - ၈၀၀၀ ကီလိုဂရမ် ၁၀၀၀ * ၆၀၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာစားပွဲခရီးသွားခြင်း CNC 1060N မှိုပြုပြင်သည့်စက် \_ t၁၁ ။ အတွင်းပိုင်း servo အိမ်ဒီဇိုင်း၊ PCB ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ၂။ စက်သည်လိုချင်သောအတိမ်အနက်ကိုရောက်ရှိသောအခါကောင်းမွန်သောစက်ဖြစ်စဉ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်သည်။ ၃။ ပွတ်တိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် PC ...
လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဦး ခေါင်း၏ 200kg Max Load နှင့်အတူကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုသုံးဝင်ရိုး ZNC EDM စက်
စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၁၀၅၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာလျှပ်ကူးပစ္စည်းခေါင်း - လျှပ်ကူးခေါင်း၏ ၄၀၀ မီလီမီတာအမြင့်ပမာဏ - 200 ကီလိုဂရမ်ဆီသိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏ - ၁၆၅၀ * ၁၁၀၀ * ၆၃၀ ကီလိုဂရမ်အသားတင်အလေးချိန် - ၂၉၅၀ ကီလိုဂရမ်မော်ဒယ် - ZNC-650 စားပွဲတင်ခရီးသွားခြင်း - ၆၅၀၅၅၀ * ၂၅၀ မီလီမီတာအမြင့်စားပွဲ - 2000kg ပုံသွင်းခြင်းအတွက်တည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးရှိသော ZNC540 လျှပ်စစ်ထုတ်စက်သည်နှစ်ပေါင်း (၂၀) ​​ကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များ၏အတွေ့အကြုံ (၂) မော်ဒယ်ISO9001: 2015 ကမ္ဘာတစ်လွှား 3. ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှု 4. လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု 5.Bette နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သောစျေးနှုန်း ...
မြင့်မားသောဖြတ်တောက်မှုမြန်နှုန်း ZNC ဝါယာကြိုးကိုလျှပ်စစ်သေတ္တာ ၃၀၀ * ၂၀၀ * ၁၈၀ မီလီမီတာဖြင့်ဖြတ်သည်
နာမည်: ZNC EDM သေနစ်မြုပ်စက်စားပွဲဝိုင်းအရွယ်အစား - ၆၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားလာခြင်း - ၃၀၀ * ၂၀၀ * ၁၈၀ မီလီမီတာလျှပ်ကူးပစ္စည်း ဦး ခေါင်း - စားပွဲ ၁၈၀ မီလီမီတာအမြင့်တင် - ၁၂၀၀ ကီလိုဂရမ် Curret - ၅၀A အသားတင်အလေးချိန် - ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ် Controller ဝင်ရိုးအမှတ်: Z Axis Control Current 50A ဖြတ်တောက်မှုမြန်နှုန်း ZNC EDM ကျစ်စက်စက်၏စားပွဲအရွယ်အစား 600 * 300mm1.For 50A Controller တွင်အဆင့် ၁၉ ဆင့်ပါ ၀ င်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအမျိုးမျိုးသောစက်နည်းလမ်းများ။ အလိုအလျှောက်တွက်ချက်ခြင်း၊ ကွက်နှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း။ သွင်းအားစုလက်ရှိ၊ က ...
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်း CNC EDM စက်၏တည်ငြိမ်မှု CNC Spark Sinker EDM စက် CNC50G
Model: CNC-50G စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၈၅၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာ - ၁၃၇၀ * ၇၂၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၅၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာလျှပ်ကူးပစ္စည်း ဦး ခေါင်း - ၁၅၀ ကီလိုဂရမ်စားပွဲတင်အိတ် - ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ်အသားတင် အလေးချိန် - ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ်အရွယ်အစား - ၂၃၀၀ * ၂၇၇၀ * ၂၆၅၀ မီလီမီတာစွမ်းအားမှပုံသွင်းစက်အတွက် CNC-50G မှန်ဘီလူးပြုပြင်ခြင်း ၁။ စက်ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ ၂။ တိကျသော CAD ဒီဇိုင်းနှင့်မြင့်မားသောတိကျမှုဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုချမှတ်ခြင်း။ ၃။ X၊ Y ၀ င်ရိုးမျက်နှာပြင်“ TU ...
JON ZNC မိုက်ခရိုဝါယာကြိုး EDM စက်သည်နစ်မြုပ်။ သတ္တုမှို ZNC-700
Model: ZNC-700 X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၇၀၀ * 550 * ၂၅၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာအရွယ်အစား - ၁၆၅၀ * ၁၁၀၀ * ၆၃၀ မီလီမီတာဇယားအရွယ်အစား - ၁၀၅၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာမက်စ်။ စားပွဲ၏အလေးချိန် - 2000kgs အသားတင်အလေးချိန် - ၂၉၅၀ ကီလိုဂရမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းခေါင်း - ၃၈၀ မီလီမီတာအရွယ်အစား - ၂၀၀၀ * ၁၇၁၀ * ၂၃၆၀ မီလီမီတာလျှပ်စစ်အားသွင်းစက် ZNC-700 ၁။ အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအဆင့်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်မီးလျှံကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဗဟိုအချက်။ 2. မြန်နှုန်းမြင့်သောအပြောင်းအလဲဖြင့် MOSFET electrocircuit ကိုလက်ခံပါ။
Ultra Fine Surface Procssing CNC EDM စက် 700 * 400mm စားပွဲတင်အရွယ် CNC450
Model: CNC-40G စားပွဲတင်အရွယ်အစား - ၇၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာအရွယ်အစား - ၁၁၃၀ * ၇၁၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၄၀၀ * ၃၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာလျှပ်ကူးပစ္စည်းခေါင်း၏ ၆၂၀ ကီလိုဂရမ်စားပွဲတင်အမြင့် - ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အသားတင် အလေးချိန် - ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အရွယ်အစား - ၂၀၅၀ * ၂၅၃၀ * ၂၄၀၀ မီလီမီတာထိရောက်မှုရှိမှန်မှုတ်ပြုပြင်သည့်လျှပ်စစ်ထုတ်စက် CNC-40G ၁။ အလွန်မြင့်မားသော precidion မှိုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်သည်။ ၂။ U-class အရည်အသွေးမြင့် Ultra-fine မျက်နှာပြင်သတင်းများ၊ အရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ ၃။ ရှုပ်ထွေးသောကွေးနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတိကျမှန်ကန်စွာပြုပြင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုစက်မှုဆိုင်ရာ Spark တိုက်စားမှုစက် ၁၇၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အသားတင်အလေးချိန်
Model: CNC2590N Table Travel: ရေနံကွန်တိန်နာ၏ ၂၅၀၀ * ၉၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာအရွယ်အစား - ၃၈၀၀ * ၁၈၀၀ * ၆၅၀mm စားပွဲတင်အရွယ် - ၂၇၀၀ * ၁၂၀၀ မီလီမီတာမက်စ်။ ဇယားဝန်တင်သည့်ပမာဏ - ၁၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အသားတင်အလေးချိန် - ၁၇၀၀၀ ကီလိုဂရမ်စီဒီစီဒီစက် CNC2590N ၁။ အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအဆင့်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်မီးလျှံကိုရှာဖွေခြင်း၊ အတိမ်အနက်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းတို့သည်ဗဟိုအချက်အချာနေရာတွင်ရှိသည်။ ၂။ မြန်နှုန်းမြင့်သောအပြောင်းအလဲဖြင့် MOSFET electrocircuit ကိုလက်ခံပါ။ ၃။ positive-negative switch function ကိုလုပ်ပါ။ တိုက်ခိုက်ရေးဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်
3890 * 4400 * 3580mm Electronica EDM စက်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှုန်းမြန်သည်
မော်ဒယ်: CNC1880N ဇယားခရီးသွားခြင်း - ၁၈၀၀ * ၈၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာ - 3000 * 1500 ** 650mm - စားပွဲဝိုင်းအရွယ်အစား - 2000 * 1000mm မက်စ်။ ဇယား၏အလေးချိန် - ၆၅၀၀ ကီလိုဂရမ်အသားတင်အလေးချိန် - ၁၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ်စီဒီစီဒီစက် CNC1880N ၁။ အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအဆင့်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်မီးလျှံရှာဖွေခြင်း၊ အတိမ်အနက်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ၂။ မြန်နှုန်းမြင့်သောအပြောင်းအလဲ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ MOSFET လျှပ်စီးပတ်လမ်းကိုလက်ခံပါ။ တိုက် ...
စားပွဲပမာဏ 8000kgs Max Load နှင့်အတူအလိုအလျောက် CNC EDM စက် 4340 * 4900 * 3590mm
Model: CNC2110N Table Travel - ၂၃၀၀ * ၉၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာ - ၃၅၀၀ * ၁၈၀၀ * ၆၅၀mm - စားပွဲဝိုင်းအရွယ်အစား - ၂၅၀၀ * ၁၂၀၀ မီလီမီတာမက်စ်။ အလေးချိန် ၈၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန် - ၁၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ်စီဒီစီဒီစက် CNC1880N ၁။ အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအဆင့်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်မီးလျှံကိုရှာဖွေခြင်း၊ အတိမ်အနက်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ၂။ မြန်နှုန်းမြင့်သောအပြောင်းအလဲ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ MOSFET လျှပ်စီးပတ်လမ်းကိုလက်ခံပါ။ တိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင် ...
Axis သုံး CNC EDM စက်၊ ၂၀၀၀ * ၁၃၀၀ * ၇၀၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာ EDM ဖြတ်စက်
Model: CNC1260N Table Travel - ၁၂၀၀ * ၆၀၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာအရွယ်အစား - ၂၀၀၀ * ၁၃၀၀ * ၇၀၀ မီလီမီတာဇယားအရွယ်အစား - ၁၂၅၀ * ၈၀၀ မီလီမီတာမက်စ်။ အလေးချိန် ၃၀၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန် - ၅၅၀၀ ကီလိုဂရမ် Axis သုံးစီစီစီဒီစက်၊ ၂၀၀၀ * ၁၃၀၀ * ၇၀၀ မီလီမီတာရေနံကွန်တိန်နာ EDM ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ၁ ။ တင်းကျပ်မှု၊ တိကျမှု၊ အရည်အသွေးမြင့်ခြင်း။ ၂။ စက်သည်လိုချင်သောအတိမ်အနက်ကိုရောက်ရှိသောအခါကောင်းမွန်သောစက်ဖြစ်စဉ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်သည်။ 3. လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးရှိခြင်း။
2000L စွမ်းဆောင်ရည်စက် CNC EDM စက်၊ စက်မှုကွန်ပြူတာထိန်းချုပ်စက်လျှပ်စစ်သုံးစက်
Model: CNC850N Table Travel: ၈၀၀ * ၅၀၀ * ၄၀၀mm မော်ဒယ်အမျိုးအစား - CNC EDM စက်အရွယ်အစားရေနံကွန်တိန်နာ - ၁၆၅၀ * ၁၁၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာဇယားအရွယ်အစား - ၁၀၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာမက်စ်။ Eletrode Head of Load: 200kgs 1000 * 600mm စားပွဲတင်အရွယ် EDM CNC850N စက်နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်း PC controller ကို 1.all မော်ဒယ်စက်နည်းလမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီနိုင်သောနည်းလမ်းများ။ ၂။ စက်သည်လိုချင်သောအတိမ်အနက်ကိုရောက်ရှိသောအခါကောင်းမွန်သောစက်ဖြစ်စဉ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်သည်။ ၃။ အလိုအလျောက်တွက်ချက်ခြင်း၊ ကွက်ညှိခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း။
2300 * 2770 * 2650mm Dimension ဖြင့်အလိုအလျှောက် Spark တိုက်စားမှု CNC Sinker EDM
Model: CNC540N Table Travel: ၅၀၀ * ၄၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာပုံစံအမျိုးအစား - CNC EDM စက်စားပွဲအရွယ်အစား - ၈၀၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာအမြင့်ဆုံးမီတာ - ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဦး စီးအကျယ် - ၁၅၀ ကီလိုဂရမ်အလိုအလျောက် Spark တိုက်စားမှု CNC Sinker EDM - ၂၃၀၀ * ၂၇၇၀ * ၂၆၅၀ မီလီမီတာ Dimension 1 ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောစက်နည်းလမ်းများ။ 2. ပုဆိန်သည်ထောက်ခံမှုအပေါ်အမှီအခိုကင်းစွာရွေ့လျားမှုကိုအခြေခံသည့်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသော worktable ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်အလွန်ကောင်းသောတင်းကျပ်မှု။ ၃။ အလိုအလျောက်တွက်ချက်ခြင်း၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းညှိခြင်း